Mon, Jan 17, 2022 | 10:05:34 NST
प्रश्नः वैदेशिक रोजगारमा रहेको व्यक्तिको परिवारले क्यान्सर जस्तो रोग लागेमा नेपाल सरकारबाट के कस्ता सेवा सुबिधा पाउछन् ? उत्तरः वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डबाट वैदेशिक रोजगारमा भएकाका परिवारलाई, क्यान्सर, मुटुरोग, पार्किनसन्स लगायतका रोग लागेमा रोगको प्रकृती र अवस्था हेरेर १५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च पाइन्छ। तपाईंले वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको कार्यलय पुरानो बानेश्वरमा गएर निवेदन दिन सक्नुहुन्छ।...
प्रश्नः वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा जति अवधीको करारमा गएको हुन्छ त्यो बिचमा कम्पनी बन्द भएर करार अवधि नसकी नेपाल फर्काएमा के कस्तो सहायता पाइन्छ यो सम्बन्धी के प्रावधान छ ? उत्तरः अर्जुन जी, हामीले तपाईंको प्रश्न पिपुल्स फोरममा आवद्ध अधिवक्त कृष्णप्रसाद न्यौपानेसँग राखेका थियौं । उहाँका अनुसार, कम्पनी बन्द हुँदा यही सहायता पाइन्छ भन्ने कानुनी प्रवधान छैन । तर करार अवधिभर काम गर्न नपाउँदा कामदार मर्कामा पर्ने भएकाले करार अवधिभरीको तलब दावी गर्न पाइन्छ । र, क्षतिपूर्ति पनि पाइन्छ । पिपुल्स ...
प्रश्नः कतारबाट मेरो भाइ तीन महिना नपुग्दै फर्किएको छ। काम राम्रो नभएर फर्किएको हो। अब उसले कहाँ कस्तो क्षतिपूर्ति पाउछ ? उत्तरः विरेन्द्रप्रसाद जी, हामीले तपाईंले सोध्नुभएको समस्या पिपुल्स फोरममा आवद्ध अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपानेसँग राखेका थियौं। उहाँका अनुसार तपाईंको भाइ सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएभन्दा फरक काममा परेर समस्यामा परेको हो भने क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ। वा काममा अप्ठेरो परेर फर्किएको हो भनेपनि काठमाडौंको वुद्धनगरमा रहेको पिपुल्स फोरममा गएर क्षतिपूर्तिका लागि सहायता लिन सक्नुहुन्छ। थ...
प्रश्नः म कतार गएको थिएँ। दुई महिनामा मेडिकल गर्दा अनफिट देखियो। म नेपाल फर्किदा ७५ दिन भैसकेको थियो। म्यानपावरमा कुरा गर्दा ६० दिनमा फर्किए मात्रै क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्छ। म के गरौ ? उत्तरः बेनामे साथी, तपाईंको समस्या हामीले पिपुल्स फोरममा आवद्ध अधिबक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपानेसँग राखेका थियौ। उहाँका अनुसार तपाईंको मेडिकल ६० दिन भित्र गरेको प्रमाण छ भने तपाईं ७५ दिनमा फर्किनुले फरक पर्दैन। तपाईं नेपाल फर्किएर मेडिकल गर्दा पनि अनफिट हुनुभयो भने मेडिकलबाट क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ। तर तपाईं मेडिकलमा ...
प्रश्नः म कतार जान भनेर काठमाडौं आएको थिएँ। मेडिकलमा अनफिट भएको रहेछु। तर दलालले फिट छौ भनेर एक लाख ५० हजार लियो। मैले अस्पतालमा सोधेर बल्ल यो थाहा पाएँ। मेरो पैसा २०७१ सालबाट दिन्छु भनेर पनि अलिहेसम्म दिएको छैन। उसलाई के सजाय गर्न सकिन्छ ? उत्तरः तुलबहादुर जी, पिपुल्स फोरममा आवद्ध अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपानेका अनुसार दलाललाई पैसा बुझाएको प्रमाण तपाईंसँग छ छैन त्यो खुलाउनुभएको छैन। दलालले मेडिकल फेल हुँदाहुँदै पैसा लिए पनि कानुनी हिसावले हेर्दा तपाईंले उजुरी गर्ने म्याद सकियो। तपाईंले ...
प्रश्नः अहिले म स्नातक पहिलो वर्षमा बढ्दै छु। म विदेश जान चाहन्छु तर कुनै सीप छैन। मैले के गर्नु पर्ला ? उत्तरः मोहन जी, सुरक्षित आप्रवासशन परियोजना सामीले मेसन (डकर्मी), सटरिङ्ग कार्पेन्टर (फर्मा लगाउने), इलेक्ट्रिसियन, स्काफोल्डिङ, गार्मेन्ट लगायतको निःशुल्क तालिम दिन्छ। तपाईंले तालिमका बारेमा थप बुझ्न ९८४१३६७९६९, ९८४०२४८०३४ र ९८४०२५५२८० मा फोन गरेर पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ।...
प्रश्नः म अहिले भिजिट भिसामा दुवईमा छु। मैले नेपाल प्रहरीले जारी गर्ने चारीत्रिक प्रमाणपत्र कसरी बनाउन सक्छु ? उत्तरः तपाईं आफै उपस्थित हुन नसक्ने भएमा तपाईंको आफन्तले प्रहरी रिपोर्ट बनाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईंको आफन्तले आफ्नो सक्कली नागरिकता सहित निम्म कागजात लिएर प्रहरी हेडक्वार्टर, नक्साल काठमाडौंको चालचलन शाखामा जानु पर्छ। चाहिने कागजातः (विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूका लागि) क) राहदानीको निम्न पृष्ठको प्रतिलिपी थान १/१: १) पृष्ठ नं - ...
प्रश्नः मैले सुने अनुसार श्रम स्वीकृती नविकरण एयरपोर्टबाट पनि हुन्छ। के यो साचो हो ? कृपया वास्तविकता के हो बुझाईदिन अनुरोध गर्दछु। उत्तरः सन्तोष जी, श्रमस्वीकृति नविकरण वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालय ताहाचल काठमाडौंमा मात्रै हुने व्यवस्था छ। त्यसैले नविकरणका लागि तपाईं कार्यालयमा जानै पर्छ। श्रम स्वीकृति नविकरण नगर्दा विदेशमा अप्ठेरो आइपर्दा सरकारले दिने क्षतिपूर्ति पाइन्न। त्यसैले पुनःश्रमस्वीकृति गराउनु होला।...
प्रश्नः मैले पोल्याण्ड रोजगारीका लागि म्यानपावरमा अप्लाई गरेको थिए। भिसा आउन ६ महिना लाग्छ भनेको थीयो। मैले एक लाख रुपैयाँ र पासपोर्ट बुझाएको ८ महिना भइसक्दा नि भिसा आएन। अब एक लाख रुपैयाँ र पासपोर्ट फिर्ता पाउन मैलै के गर्नु पर्छ ? साथै पोल्याण्डको भिसा आउन कति समय लाग्छ ? उत्तरः जगदिश जी, पोल्याण्ड रोजगारीका लागि नेपाल सरकारले खुल्ला गरेको देश हो। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व महासचिव कमल तामाङका अनुसार, पोल्याण्डले कृषि र कुखुरा फार्ममा कामदार लैजान्छ। तपाईंले भरपर्दो म्यान...
प्रश्नः आजाद भिसामा कतार पठाउछु भन्दै एउटा दलालले दुई लाख ३० हजार लिएको चार महिमा भयो। मलाई पेन्टरको तिन महिने भिसा प्रिन्ट गरेर दिएको छ। धेरै पैसा लागेको र गैर कानूनी काम जस्तो लागेर आजाद भिसामा जान्न भन्दा, भिसा रद्द गर्न पैसा लाग्छ भन्छ। अनि हवाइ टिकट नकाट म जादिन भन्दा नि टिकट काटेर मलाई त जानै पर्छ गइनस् भने तेरो पुरै पैसा डुब्छ भन्छ। म के गरुँ ? उत्तरः अरुण जि, पिपुल्स फोरममा आवद्ध अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपानेका अनुसार, खाडीका देश र मलेसियामा रोजगारीका लागि जान सरकारले फ्रि भिसा फ...